नेपाल आज | यौन-साथीका पनि प्रकार, तपाई कस्तो प्रकारकाे? यस्ता छन् सात किसिमका यौन-साथी
यौन-साथीका पनि प्रकार, तपाई कस्तो प्रकारकाे? यस्ता छन् सात किसिमका यौन-साथी
भनिन्छ, दाम्पत्य सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने कुरा उनीहरुको यौन जीवनले पनि निर्धारण गर्छ ।
के पनि भनिन्छ भने, सफल यौन जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने मात्र होइन, निरोगी पनि हुन्छ । तर, यसका लागि त्यो यौन क्रिया रचनात्मक र सक्रिय हुनुपर्छ ।
यौन शारीरिक क्रिया भएपनि यसमा भावना जोडिएको हुन्छ ।
उनीहरुको सोचाई हुन्छ कि, यौन नै तनाव कम गर्ने राम्रो औषधि हो ।